Huawei Nova 7i (8GB/128GB) တွေ ဈေးကျသွားပြီနော် ~ The ICT.com.mm Blog
Huawei Nova 7i (8GB/128GB) တွေ ဈေးကျသွားပြီနော်
4 cm အနီးကပ်အထိ ပန်းပွင့်ချပ်ပေါ် နှင်းကျခြင်းမှအစ လိပ်ပြာတောင်ပံပေါ်က အနုစိတ်အမှတ်အသားအဆုံး လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သေးငယ်တဲ့ကမ္ဘာကို2MP Macro ကင်မရာနဲ့ ရှာဖွေနိုင်
Huawei Nova 7i မှာတပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ ကင်မရာလေးလုံးထဲမှ သီးသန့်တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ Bokeh ကင်မရာက AI ရဲ့ အတိမ်အနက်တွက်ချက်မှု စွမ်းရည်နဲ့အတူ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးတဲ့အခါ နောက်ခံ Background တွေကို သဘာဝကျကျဝါးသွားစေမှာပါ။
40 W HUAWEI Super Charge နဲ့ အားသွင်းမြန်ပြီး၊ 4200 mAh ရှိတဲ့ အကြာကြီးခံမယ့် ဘက်ထရီ
သေသပ် လှပတဲ့အရောင်ဆန်းလေးနဲ့ 6.4″ HUAWEI Punch Full View Display က ပိုနေသောနေရာမရှိဘဲ လှပသောမျက်နှာပြင်ကိုသာ တွေ့မြင်ရမှာပါ။
120° Ultra Wide Angle ကင်မရာနဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာမြင်နိုင်ပြီး 17 mm Focal Length ကြောင့် 140% မြင်ကွင်းတွေကို ပိုမိုဖမ်းယူနိုင်လို့ Group ဓာတ်ပုံလား? သဘာဝရှုခင်းတွေလား? အလန်းဆုံးတွေကို ဖန်တီးနိုင်ပြီပေါ့။
48MP Rear Camera နဲ့ အသေးစိတ်ပုံရိပ်တွေကအစ Zoom ဆွဲကြည့်ရင်တောင် ဝေဝါးခြင်းမရှိဘဲ Memory 8GB/ Storage 128GB ဆိုတော့ ဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်တွေအကြိုက်ဘဲနော်
ဈေးကလည်း K369,000 ကနေ ခု K299,000 ကျသွားပြီနော်
Skyline Gray Color,
Shop here: http://bit.ly/3q3lUCY
Sakura Pink Color,
Shop here: http://bit.ly/2LzmVUk
Midnight Black Color,
Shop here: http://bit.ly/2LGmaZS
Crush Green Color,
Shop here: http://bit.ly/3sec5nM
Newer Android game တွေကို PC မှာ screen ကြီးကြီးနဲ့ အားရပါးရ ဆော့ချင်သူတွေအတွက် Software ကောင်းလေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
Older TP-Link ရဲ့ Network ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ICT.com.mm မှာ စိတ်ကြိုက် ရွေးဝယ်နိုင်ပြီနော်။